Nayakhabar.com: कान्ति अस्पताल पुगेका स्वास्थ्यमन्त्रीले सोधे- पैसा नभएकालाई उपचार गर्ने पद्धति के छ ?
कान्ति अस्पताल पुगेका स्वास्थ्यमन्त्रीले सोधे- पैसा नभएकालाई उपचार गर्ने पद्धति के छ ?
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कान्ति बाल अस्पतालको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा मन्त्री थापाले अस्पतालको वस्तुअवस्थाबारे जानकारी लिए भने अस्पतालका पदाधिकारीले अस्पतालको अवस्था तथा कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका छन् ।
अस्पतालका निर्देशक डा। अजित रायमाझीले अस्पतालमा ३ सय बेड रहे पनि अपर्याप्त भएको बताए । अस्पतालमा थप २ सय बेड आवश्यक रहेको उनले सुनाए । निर्देशक डा. रायमाझीको ब्रिफिङ सुनेपछि स्वास्थ्यमन्त्री थापाले प्रश्न गरे, ‘कोही पैसा नभएको अस्पताल आउँछ भने उसलाई उपचार गर्ने पद्धति के छ ’
‘तपाईहरुले अस्पतालबारे राम्रो जानकारी त दिनुभयो । तर, यस अस्पतालमा आएका विरामीले उपचार नपाएर फर्कनु परेको कति घटना छ रु त्यसबारे केही जानकारी संकलन गर्ने प्रयास भएको छ रु भन्दै मन्त्री थापाले व्यंग्य मिश्रित प्रश्न गरे ।
उनले यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आफ्ना कार्यक्रममा राख्न अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै कान्ति बाल अस्पतालमा सेवा नपाएर विभिन्न निजी अस्पताल जानु परेको तथा अस्पतालबाट विना उपचार फर्कनु परेको विरामीको ‘लिस्ट’ दिन पनि स्वास्थ्यमन्त्री थापाले अस्पताललाई निर्देशन दिएका छन् ।